Akanjo orana → Akanjo miasa • peta-kofehy solosaina P&M
Rainwearatolotray anao ao amin'ny anay fivarotana dia vita tamin'ny fitaovana voamarina avo lenta izay mifanaraka amin'ny fenitra sy fenitra henjana. Izy io dia iray amin'ireo karazana akanjo izay malaza be amin'ny fararano sy ny ririnina, eo akaikin'ny volon'ondry mafana sy akanjo ba mampahazo aina.
Nozaraina sokajy maromaro ny akanjo rotsakorana mba hanamorana ny fikarohana. Ny karazany atolotray dia azo ampiasaina amin'ny indostria maro. Safidy lehibe sy vidin'ny fifaninanana dia hamela anao hahita ny vokatra mety.
Hitanisa ity pejy ity Fanatanjahantena solosaina - inona izany?
Modely marobe isan-karazany amin'ny vanim-potoana sy indostria
Ny akanjo mando dia tsy mahazaka rano noho ny sosona anatiny manokana namboarina hitazomana sy ahazoana aina ny mpampiasa.
Izahay dia manolotra: andiana, palitao, palitao, pataloha, ponchos. Ny malaza indrindra dia ny set izay manamora ny fifantenana amin'ny alàlan'ny famoahana ny filana mifidy singa tsirairay. Manolotra habe marobe izahay, ary koa akanjo manerantany.
Sets vita amin'ny fitaovana malefaka. Ireo set dia misy, ankoatry ny hafa avy amin'ny dungarees sy palitao. Izy ireo dia manome fiarovana feno amin'ny hamandoana - voatazona amin'ny sosona ivelany izy io, ary ny singa fanampiny toy ny paosy zipo dia manampy amin'ny fiarovana ireo entana miafina tsy ho lena. Ny kitapo tsy misy orana dia mamela ny fikorianan'ny rivotra maimaim-poana, izay ilaina mba hampihenana ny loza ateraky ny hatsembohana be loatra.
akanjo ny akanjo mando dia manome fiarovana tonga lafatra amin'ny hamandoana noho ny fampiasana fitaovana avo lenta. Ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia midika hoe maharitra maharitra sy mahatohitra mafy ny fahasimbana. Ny tolotra dia misy maodely marobe - manomboka amin'ny mahia ho an'ny zlotys vitsivitsy ka hatramin'ny lafo kokoa sy matanjaka kokoa amin'ny cuffs, mahatohitra kokoa ny fiovana.
palitao raincoats dia departemanta misy vokatra marobe avy amin'ireo mpamokatra tsara indrindra ho an'ireo olona mifantoka amin'ny fiaretana sy fampiasana mafy. Ireo palitao dia mahafeno fari-pitsipika marobe, ny maodely sasany dia manana singa hita taratra hanatsarana ny fahitana sy ny fiarovana. Marihina manokana fa maodely miovaova izay manome fiononana feno amin'ny toe-batana manao asa manokana.
Fiarovana amin'ny anton-javatra ivelany
Akanjo miasa orana, izay ho hitanao ao amin'ny magazinay, dia manome fiarovana lehibe amin'ny orana na ny rivotra. Ny tombony lehibe azony dia ny fampiononana ny fampiasana, izay tsy mametra ny fahalalahana mihetsika. Ny habe sahaza azy dia mamela ny hetsika tsy misy korontana mandritra ny asa na ny hetsika hafa. Ilaina ihany koa ny mijery ny faharetana maharitra sy ny fanoherana ny fahasimbana. Ny famokarana akanjo ataon'ny orinasa manampahaizana manokana amin'ny fampiharana ny fepetra takiana amin'ny akanjo manokana dia miantoka ny fikorianan'ny rivotra araka ny tokony ho izy, ka mampihena ny risika amin'ny hatsembohana. Noho ireo fananana ireo dia mihena ny fahita matetika amin'ny fividianana akanjo vaovao.
akanjo vita amin'ny ririninaakanjo mafana castoramaakanjo ba decathlonakanjo ba mitondra motofitafiana tsy misy oranaakanjo ba mitondra motoakanjo mihaza tsy misy oranaakanjo ba miaroakanjo zaridaina tsy misy oranarainwearrainroakanjo ba mando vehivavyakanjo ba decathlonakanjo mando ho an'ny ankizyakanjo lava ho an'ny mpitondra motoakanjon'oranaakanjo vita amin'ny rotsakaakanjo mandry soavalyakanjo mafana Koszalinakanjo mafana Krakowakanjo ba mitondra motoakanjo ba mitondra motoakanjo lava ho an'ny motoakanjo ba bisikiletaakanjo mafana ho an'ny trondroakanjo lava ho an'ny scooterrainwear proakanjo orana miasaakanjo akanjo vita amin'ny hazaakanjo rotsakorana asan'ny vehivavyakanjo ba avy any ivelanyakanjo ba manjonofitafiana orana miaramilaakanjo mafana pvcakanjo miasa palitao ranonoranamiasa akanjo palitaoakanjo asa tsy misy oranaakanjo fanatanjahan-tena tsy misy oranafitafiana manjono tsy misy oranafitafiana orana miaramilaakanjo mafanaakanjo ba mitondra motofitafiana azo avy amin'ny oranaakanjo orana miasa